Imimmaan Qeerransaa | Oromo Freedom News and Views
← New Adama mayor suspends eight city council members
License to criticize Oromo struggle →
Seera waliin mura ta’ee jala odaa.
Booda buudaan bartee waa’ee saba sanaa
Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame .
Jallina akkasii goototi argani
Lammiif fi maatiin isaa maaliif hin yaadatu!
Maaliif waliin teenyee maqaasaa hin farfannu!
Maaliif ruhii gootaa hin galatteeffanne?
Warabeessi fi waangeen, wawwacoofi dhaddeen
Akka bara duri barooduu yoo dhisie
Akka waan daboomee afaansaa yoo use
Akka baala raafuu gooti du’ee hin hafu!
Ofirra buqqisuuf qarriffaa fi Ilkee
Awwala gararraa eenyu tu isaa ka’a?
Nuhoo gargar deemna Zayita fi bishaan taanee
Utuu wal-qoqqoddnu eegee taanee hafne!
Goota onnee madaa kan hin beekne sodaa
Kaayyoo isaanii haa eegnu!